Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » eTurboNews dia anarana mahatsiravina ho an'ny marika: Izany no antony
Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hita • LGBTQ • fivoriana • Vaovao • People • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Syndication • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Divay & Fanahy • WTN
eTurboNews dia anarana mahatsiravina amin'ny marika. Ny tantaran'ity famoahana eran-tany ity izay mikendry ny indostrian'ny fitsangatsanganana, ny fomba fiainana ary ny zon'olombelona dia miavaka ary nanomboka tany Indonezia.
Tamin'ny taona 1999-2001, ny DMC Bloody Good Stuff teo ambany fitarihan'i Juergen Steinmetz sy Melanie Webster dia nisolo tena ny fizahan-tany Indonezia tany Etazonia sy Kanada.
Niarahana tamin’ny minisitry ny Kolontsaina sy ny Fizahantany Indoneziana teo aloha, ttara izy Hon. Ardika avy any Bali.
Ny iray amin'ireo fanamby tamin'izany fotoana izany dia ny politika ary niteraka fampitandremana momba ny dia nataon'i Etazonia hanoherana ny Repoblika Indonezia.
Tamin'ny taona 2000, tamin'ny fetiben'ny fizahantany TIME tao Jakarta, Juergen Steinmetz dia nahazo medaly ho an'ny zava-bita manokana ho an'ny fizahantany Indoneziana nataon'ny Filohan'i Indonezia tamin'ny hetsika faobe tao amin'ny Plaza Indonezia.
Tsy natoky ny sehatra tsy miankina ny sampan-draharaham-panjakana tamin’izany, ary tsy natoky ny fanjakana koa ny tsy miankina. Ny Bloody Good Stuff dia nanomboka ny Filankevitry ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany indoneziana mba hampivondronana ny indostria.
Ny ICTP dia nitady fomba mahomby amin'ny fiatrehana ireo masoivoho fitsangatsanganana any Etazonia mba hanabeazana ny sehatra momba ny jeografian'i Indonezia. Ilaina izany mba hivoahan'ny hafatra fa tsy misy fiantraikany amin'ny fizahantany any Bali ohatra ny olana any Jakarta.
Tany amin'ny taonan'ny zazakely ny Internet, saingy efa nanana mailaka ny ankamaroan'ny mpivezivezy, ny sasany nanana tranonkala.
Juergen Steinmetz dia niara-niasa tamin'ny eTurbo Hotels monina any Singapore ho mpanohana ary nanomboka ny gazety iraisam-pirenena voalohany momba ny fitsangatsanganana tamin'ny alàlan'ny endrika Yahoo Group. Nantsoina izany eTurboNews, manaiky ny mpanohana.
eTurboHotels no orinasa Expedia karazana voalohany. Nanana sehatra vohikala maro toa ny sheraton.id na hilton.id izy ireo ary nanolo-tena hanangana tranokala maimaim-poana ho an'ny orinasa fitsangatsanganana Indoneziana. Ny maodely famatsiam-bola dia mitaky komisiona ho an'ny famandrihana an-tserasera.
Miaraka amin'ny fanampian'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany Indoneziana, izany eTurboNews Nitombo haingana ny Yahoo Group.
Vondrona hafa, toy ny vondrona ASEAN TOURISM DISCUSSION, dia nitondra mpitarika eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana avy amin'ny firenena ASEAN mba hiresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny fizahantany. Maro amin'ireo fandaharana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fizahan-tany ASEAN no nanomboka tamin'ity adihevitra ity.
Ny Hawaii Talk Group dia lasa fahafahana tsy misy dokam-barotra ho an'ny mpandraharaha fitsangatsanganana hifandray amin'ny hotely sy mpamatsy hafa any Hawaii ary hifanakalo hevitra, fiderana ary tsikera. Tamin'ny 2002 eTurboNews, dia nolazain'ny Hawaii fizahan-tany fizahan-tany (HTA) fa tsy manana hoavy firy ny efitra firesahana amin'ny Internet, ary tsy hihevitra ny hanohana ny fifanakalozan-kevitra toy izany izy ireo.
Nandritra izay fotoana izay, eTurboNews nanomboka bilaogy malaza maromaro anisan'izany ny Fihaonana, Aviation, Divay, GayTourism, TravelIndustryDeals, WorldTourismWire, ary HawaiiNews.Online nidera tamin'ny fantsona media sosialy azy manokana.
eTurboNews niitatra eran'izao tontolo izao ny syndication, ary hita ao amin'ny Hindustan Times ao India ny lahatsoratra navoakan'ny maro hafa.
eTurboNews lasa fitaovana vaovao ho an'ny vaovao momba ny dia sy ny fizahan-tany izay nitombo haingana tany amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao. eTurboNews nanova ny endrika avy amin'ny Yahoo Group ho endrika mailaka faobe hafa, lasa mahaleo tena avy any Indonezia tamin'ny 2001, ary natomboka ny haino aman-jery an-tserasera mahaleo tena voalohany ho an'ny sehatry ny dia sy ny fizahantany.
22 taona aty aoriana, eTurboNews mbola mitoetra ho ny tena raharaha.
eTurboNews dia ary izy no gazety eran-tany voalohany navoaka isaky ny ora 24/7. Io no hany tariby tsy miankina sy manerantany amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany miaraka amin'ny votoaty misy hevitra tsy hita afa-tsy amin'ny eTN.
Miaraka amin'ny mpanjifa mailaka ara-barotra 230,000+, ny fizarana mailaka dia eo amin'ny 10% amin'ny mpamaky amin'ny ankapobeny.
Ireo mpanangom-baovao ao anatin'izany ny Google sy ny Bing News, ny Breaking News, ny media sosialy, ary ny fampandrenesana fanosehana dia nampitombo ny fahitana ny eTurboNews be dia be nandritra ny taona maro.
Herintaona lasa izay, Hawaii no foibe eTurboNews nanangana tranokala tsy miankina 92 ​​miaraka amin'ny naoty manokana sy SEO mba hampiroboroboana votoaty amin'ny fiteny 92 manerana izao tontolo izao. Espaniola, Alemana, Frantsay, Sinoa, Arabo, Hindi, Swahili, Portiogey ary Italiana no mpihazakazaka voalohany amin'izao fotoana izao ho an'ny mpamaky tsy miteny anglisy.
Miaraka amin'ny mpamaky amerikana tokana maherin'ny 2 tapitrisa izay misokatra eTurboNews lahatsoratra, Etazonia no be indrindra amin'ny mpihaino, arahin'ny UK, Alemana, India ary Kanada.
Amin'izao fotoana izao, eTurboNews hita any amin’ny tany sy faritany 238. Ny faritany kely indrindra dia any Antarctica izay manana mpamaky iray monja, ary tsy fantatra hoe iza io mpamaky iray io.
Ny tanàna lehibe indrindra izay eTurboNews Mety ho hita dia Frankfurt, Washington, London, New York, ary Dusseldorf.
eTurboNews dia mpikambana mpanorina ny Birao fizahantany afrikanina, ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany, ary ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, ary nanangana ny tsy miankina Fikambanana fizahan-tany any Hawaii ho setrin'ny Hawaii Talk Yahoo Group teo aloha.
eTurboNews mijanona ao Honolulu, Hawaii, Etazonia, miaraka amin'ny asa mahaleo tena any Duesseldorf, Alemaina, ary mpanoratra tsy miankina any amin'ny firenena 128.
eTurboNews mijanona ho mpitarika tsy iadian-kevitra ary lohalaharana amin'ny tatitra mahaleo tena ho an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany, ny fomba fiaina, ny lamaody, ny zon'olombelona ary ny votoaty mahaliana hafa.
Rehefa nanafika ny tontolon'ny fizahantany ny COVID-19, eTurboNews niaraka tamin'ny PATA, ny filankevi-pitantanan'i Nepal, ary ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia nanangana ny Fanarenana.travel vondrona tamin'ny martsa 2020 teo anilan'ny seho ara-barotra ITB nofoanana tany Berlin, Alemaina.
Ity vondrona ity dia nipoitra tao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny firenena 128 amin'izao fotoana izao.
Taorian'ny dinika zoom malaza 257, eTurboNews ary ny World Tourism Network dia nahavita nitazona ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ary ireo mpitarika azy ireo ho tafaray sy hirotsaka.
miaraka Livestream, eTurboNews Nanomboka ny fantsona fampahalalam-baovao manerantany 24/7 voalohany, ny Fampisehoana Vaovao Vaovao, sy etv. Ny mpamaky dia afaka mahita horonan-tsary eTN sy fifanakalozan-kevitra amin'ny fotoana tena izy mandeha amin'ny rehetra eTurboNews tranokala, mpiara-miombon'antoka syndication, ary sehatra am-polony.
Izany dia mifameno amin'ny fifantenana eTN Podcast. Ny lahatsoratra vaovao rehetra amin'ny eTurboNews azo vakiana, henoina toy ny podcast, ary jerena toy ny horonan-tsary ao amin'ny Channel YouTube eTN sy oireo sehatra fantatra.
Firenena sy faritany izay eTurboNews dia hita:
Alemanina: 202,715 XNUMX
Afrika atsimo: 54,047
Espana: 19,492 XNUMX
Korea atsimo: 10,887
Arabia Saodita: 8,921
Zimbaboe: 6,501 XNUMX
Ukraine: 6,009 XNUMX
Nouvelle Zélande: 5,490
Tseky: 5,333 XNUMX
Zeorzia: 3,806 XNUMX
Letonia: 2,712 XNUMX
Slovenia: 2,108 XNUMX
Repoblika Dominikanina: 1,734
Makedonia Avaratra: 1,660
Botsoana: 1,493 XNUMX
Bosnia sy Herzogovina: 1,145
Antigua sy Barbuda: 1,023
Nosy Virgin US: 718
Nosy Cayman: 659
Côte d'Ivoire: 597
Syria: 523 XNUMX XNUMX
Nosy Solomon: 477
Sodana atsimo: 396
St.Vincent & Grenadines: 366
Nosy Virijiny Britanika : 196
Karaiba Netherlands: 149
Martinika: 148 XNUMX
Polinezia frantsay: 145
Samoa Amerika: 93
Saint Martin: 91
Nosy Mariana Avaratra: 57
Guinea ekoatera: 51
Nosy Faroe: 48
Guyana frantsay: 33
Nosy Cook: 30
Repoblikan'i Afrika Afovoany: 29
Md Barthélemy: 29
Saint Helena: 19
Nosy Man: 16
Nosy Marshall: 16
Sahara Andrefana: 14
Nosy Falkland: 11
Nosy Aland: 5
Faritanin'ny Ranomasimbe Indianina Britanika: 3
Korea Avaratra: 3
Nosy Norfolk: 2
Tanàna lehibe indrindra izay eTurboNews dia hita:
Ashburn, VA, Etazonia: 38,640
Dubai, Emirà Arabo Mitambatra: 18,771
Columbus, NY: 13,053
Portland, NY: 12,923
Milan: 9,469 XNUMX
Madison, NY: 7,251
Springfield, NY 7,024
Milwaukee, NY: 6,941
Huntville, NY: 6,818
Cleveland, NY: 6,263
Memphis, NY: 5,634
Tanànan'i Cebu: 5,633
Cincinnati, NY: 4,554
Atena: 4,423 XNUMX
Roma: 4,344 XNUMX
Albuquerque, NY: 4,228
Varsovia: 3,480 XNUMX
Munich: 3,388 XNUMX
Lincoln, NY: 3,173
Newark, NY 3,020
Tanànan’i Ho Chi Minh: 2,869
Voaloboka: 2,747 XNUMX
Prague: 2,697 XNUMX
Belgrade: 2,608 XNUMX
Bucarest: 2,561 XNUMX
Canton: 2,414 XNUMX
Ampahany : 2389
Riandranon'i Sioux: 2,216 XNUMX
Eugene, NY: 2,098
Kairo: 2,092 XNUMX
Sal-Alam: 2,091 XNUMX
Jersey City, NY: 2,065
Lisboa: 1,856 XNUMX
Troy: 1,837 XNUMX
Lohataona Hill: 1,832
Buffalo: 1,813 XNUMX
Masindahy Paoly: 1,668
Cypress: 1,667 XNUMX
Tanànan’i Mexico: 1,661 XNUMX
Helodranon'i Montego: 1,632
Pasig: 1,616 XNUMX
Yerevan: 1,592 XNUMX
Kanehoe, NY: 1581
eTurboNews dia ao anatin'ny TravelNewsGroup. Statistika bebe kokoa momba ny tratran'ny eTurboNews Mety ho hita amin'ny travelnewsgroup.com/reach.